‘पत्रकार र निजी क्षेत्रले कुरा बुझिदिएनन्, डुईङ बिजनेश रिपोर्ट सच्याउन भनेका छौं’: अर्थमन्त्री डा. खतिवडा | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर ‘पत्रकार र निजी क्षेत्रले कुरा बुझिदिएनन्, डुईङ बिजनेश रिपोर्ट सच्याउन भनेका छौं’: अर्थमन्त्री डा. खतिवडा
on: १५ मंसिर २०७५, शनिबार १९:५४ मुख्य खबर, समाचार
‘पत्रकार र निजी क्षेत्रले कुरा बुझिदिएनन्, डुईङ बिजनेश रिपोर्ट सच्याउन भनेका छौं’: अर्थमन्त्री डा. खतिवडा
म अहिले सरकारमा छु । तपार्इंहरु(पत्रकारहरु) सरकारको प्रमुख प्रतिपक्ष चाहिँ होइन । तपाईहरु हाम्रो सहकर्मी नै हो । हामीले बाटो बिरायौं भने बाटो देखाइदिने हो । तर, असल बाटोमा हिंडिराखेको बेलामा पनि जिम्मेवारी विहीन हुने खालका प्रतिपक्षले जसरी गाली गरिराख्या हुन्छ, त्यो काम चाहिँ तपाईहरुको धर्मभित्र पर्दैन । मैले बुझेको पत्रकारिता यही हो । तपाईहरुले यसको पालना गर्नुहुन्छ । कहीँ कथम कदाचित हाम्रा गल्ती छन् भने पनि मज्जाले देखाइदिनुस् । राम्रा काम गरेको छ भने एउटा दुईटा भनिदिँदा पनि केही फरक पर्दैन । किनभने तपाईहरु प्रतिपक्ष होइन् । त्यति कुरा चाहिँ आज मैले तपाईहरुलाई भन्नै पर्नेहुन्छ ।
कहिलेकाहीँ अङ्कको मिथ्या बहसमा हामी कुदिराख्या हुन्छौं । कहिले ४ खर्ब (व्यापार घाटा)को बहसमा, कहिले १८ करोड(राष्ट्रपतिका लागि सवारी साधन खरीद)को बहसमा । नभएका अङ्कको बहसमा पनि हामी कुदिरहेका हुन्छौं । तपाईहरुले एकचोटि हेर्नुस् न । १८ को अङ्क आफैमा सही हो कि होइन । ४ खर्बको अङ्क आफैमा कति ठीक हो ? भेरिफाइ त गर्नुप¥यो नि । अब त परिपक्व भैसक्नुपर्ने हो । हामीले तपाईंहरुलाई सूचना दिन, जानकारीहरु दिन कञ्जुस्याईँ ग¥याछौं भने तपाईहरुले त्यसमाथि पनि गाली गर्नुपर्छ ।
व्यापार घाटाका कारण
अब, व्यापार घाटा के कारणले भएको छ ? हामी ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि खोजिराखेका छौं । १० खर्ब भन्दा माथिको वार्षिक लगानी खोजिराखेका छौं । १४–१५ खर्बको लगानी नभई हामीलाई ८ प्रतिशतको बृद्धि ल्याउन पनि कठिन छ । लगानी पनि बढाउनु छ । त्यसका लागि पूँजीगत सामान, मेशिन, औजार, उपकरण, कच्चा पदार्थ सबै आयात गर्नु परेको छ । हाम्रो आयातको दुई तिहाई खर्च त त्यस्तै वस्तुमा छ । हवाई जहाज पनि किन्नु परेको छ । हवाई जहाज खरीदको पारदर्शिताको बारेमा तपाईहरुले लेखिरहनुभएको छ । जवाफदेहि पनि हुनुपर्छ । त्यो एक ठाउँमा छ । तर, जहाज नल्याईकन पर्यटक कहाँबाट ल्याउने ? पर्यटक नल्याईकन आम्दानी कहाँबाट हुने ? त्यहि जहाज किन्दा १०–१२ अर्व भएपछि व्यापार घाटा त बढ्ने नै भयो नि ।
ऊर्जाका क्षेत्रमा हामीलाई १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नु छ भन्छौं । यसका लागि कति लागत चाहिन्छ ? ऊर्जा विज्ञहरु भन्नुहुन्छ २० खर्ब रुपैयाँ । अनि २० खर्ब लागतमा दुई तिहाई खर्च चाँही आयातित सामानमा हुन्छ, ऊर्जामा । यो भनेको १२ खर्बको व्यापार घाटा त त्यहिं हुने देखेको छु मैले । कि अब हामीले विद्युत उत्पादन गर्दैनौं भन्नु पर्यो, कि पर्यटक ल्याउँदैनौं भन्नु पर्यो, कि उद्योग खोल्दैनौं भन्नु पर्यो । अब आयात बढ्नु आफैंमा छलफलको विषय हुन्छ । धारे हात लाउनु पर्ने विषय होईन् । तर, के को आयात बढेको छ भनेर तपाईहरुले बिश्लेषण गरिदिनु पर्यो । गाडी आयात धेरै भयो, उपभोग्य वस्तु, नेपालमै उत्पादन गर्ने वस्तु धेरै आयात भयो, तपाईहरु त्यसमा बढी फोकस हुनु पर्यो । आयातको भित्र गएर गहन अध्ययन गरेर लेखिदिनुपर्यो ।
घाटाको अर्को पाटो निर्यात हो । निर्यात किन बढेन त ? हामी वस्तु निर्यात गर्न किन सकेनौं त ? केहि कारणहरु छन्, लामो द्धन्द्धले हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्यो, विद्युत भएन, यातायातको खर्च बढ्यो, भन्सार बिन्दुदेखि वा पोर्टको अवस्थादेखि भन्सारसम्मको बाटोको अवस्थाका बारेमा अत्यन्त गहन भएर छलफल गर्नु छ । त्यति मात्रै होईन, श्रम सम्बन्ध, बिद्युत आपूर्ति, राजनीतिक अस्थिरताका कारण नीतिगत अस्थिरता थिए । यि कारणले पनि व्यापार घाटा भएको थियो ।
मुलतः हाम्रो निर्यात नपुगेर हो । निर्यातका लागि अन्तरराष्ट्रिय बजार हेर्नुपर्दछ । वस्तु र सेवाको निर्यात गर्नु पर्छ । यसका लागि पर्यटनलाई अलि बढी सेवा निर्यातको हिसाबमा हेरेको छु । मेरो चिन्ता चाँही अहिले पर्यटन सेवा, यातायात सेवा, बीमा सेवा, बैङ्किङ सेवा जस्ता क्षेत्रमा पनि हाम्रो आम्दानी भन्दा खर्च बढी भएको छ । यसलाई घटाउनु छ ।
हामी मुलतः चालू खाता सन्तुलनमा छ की छैन भनेर हेर्छौं । वस्तु आयात गरेर सेवा निर्यात गर्दा कुनै नोक्सानी हुंदैन्, सन्तुलन नै हुन्छ । समग्र भुक्तानी सन्तुलन, त्यो भन्दा अगाडि चालू खाता त ठिक हुनु पर्यो नि । त्यो नभएकोमा चिन्ता छ हामीलाई । त्यसतर्फ के गर्यो भने यो रोक्न सक्छौं भनेर चिन्ता छ ।
विदेश भ्रमणमा अलिकति के कडाई भएको थियो । विदेश भ्रमणमा २५०० बाट १५०० के भएकोमा अब फेरि शुरु भयो । व्यापारघाटा बढ्यो भनिरहंदा समाधानका उपायहरु दिइरहंदा खेरी यो त ठिकै गर्यो है सरकारले भन्यो भने राम्रो हुन्थ्यो । आफैंलाई दोधार हुनेगरी समाचार लेखिदिंदा सरकार एकदमै अप्ठ्यारोमा पर्छ । यो मान्ने कि त्यो मान्ने ? कहिलेकाँही हाम्रा निर्णयहरु पनि विवादित हुन्छन् तपाईहरुका विचारहरु र समाचारहरु पनि विवादित हुन सक्छन् । किनभने हामी ‘लजिकल्ली’ गएनौं भने हामी समस्यामा पर्छौं ।
हामीले त्यस्तो विकास खोजेका छौं, जुन विकासमा सबै उत्पादक शक्तिहरु सहभागि हुन्छन् । सबै उत्पादक शक्तिहरुले आफ्नो सहभागिताको आधारबाट सबैले लाभ पाउने हुन्छ र त्यो सधैंको लागि हुन्छ । त्यसलाई समाजवाद भन्नुस वा अर्को कुनै वाद भन्नुस कुरा यत्ति नै हो । कुनै वाद पनि अन्त्यमा गएर मानव मात्रको कल्याणको लागि अथवा नागरिकको सर्वोपरि हितको लागि वादको सृजना गरिएको हुन्छ । वाद आफैं निरपेक्ष विषय होईन् । वादलाई हाम्रो विकासको आवश्यकता र हाम्रो सन्दर्भमा ब्याख्या गर्दै लाने हो । हामीले के भनेका छौं भने यदि सबै उत्पादक शक्तिको सहभागितामा सबैको लागि विकास हुन्छ र त्यो सधैंको लागि हुन्छ भने त्यो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र प्रणालीतर्फ अगाडि जाने बाटो हो भनेर हामीले भनेको हो । सबैको सहभागिताका लागि नै निजी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य गर्नुपर्यो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सहकार्य गर्नुपर्यो । हाम्रो मात्र सहकार्यले पुगेन ।
८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि चाहिने स्रोतका लागि विदेशी पूँजी पनि चाहियो । चाहे त्यो निजी लगानी होस चाहे सहायता होस चाहे त्यसभित्रको प्रविधि हस्तान्तरण होस् । यो सबैका लागि विदेशीसँगको सहकार्य पनि चाहियो । दुईपक्षीय, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय सबै प्रकारका सहयोग संयन्त्रको पनि हामीलाई आवश्यकता पर्यो । सङ्घीय संरचना, विकासका साझेदारहरुसँग, आन्तरिक र बाह्य दुईटैको सहभागिता हुने विकास दीगो विकास हुन्छ भनेर म आफैंले वकालत गर्नु पर्ने हुन्छ । ती लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया नै अवको विकासको बाटो हो ।
सिक्टा सिञ्चाईको बारेमा
सिक्टा सिञ्चाई आयोजनासँग विगतमा म पनि जोडिएको र योगदान छ । यो आयोजना बनाउनु पर्छ भन्नेमा म पनि छु । २०६० सालमा म राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य थिएँ । सिञ्चाईमा दातृ निकायहरुले पैसा हाल्न छाडेका थिए । एशियाली विकास बैङ्कले भूमिगत सिञ्चाई परियोजना भनेर अलिअलि पैसा हालिदिन्थ्यो । विश्व बैङ्कले सिञ्चाईबाट हात झिकेको थियो । हामी हाम्रो आन्तरिक पैसाले सिञ्चाई आयोजना बनाउन सक्षम थिएनौं । दुई पक्षीय मुलुकहरुसँग कुरा गर्दा उहाँहरुलाई कसले के भन्यो कुन्नी हामी सहयोग गर्न सक्दैनौं, हामीलाई अन्तरराष्ट्रिय दवाव आयो भनेर हातखुट्टा छोडिदिए । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी र मैले हाम्रो पैसाले सिक्टा सिञ्चाई आयोजना बनाउँ, शुरु गरौं भनेर लाग्यौं । हामीले तल्लो तटीय क्षेत्रको लाभग्राही मुलुक भएकोले यहाँ हाम्रो सरोकारको विषय छ भनेर अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा आपत्ति ब्यक्त गर्न सकिन्छ भनेर लाग्यौं । र हामीले ०६० सालको बजेटमा पहिलो पटक सिक्टा सिञ्चाई आयोजनाका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्यौं । त्यतिबेला ५० करोड भनेको ठूलो रकम थियो । पहिलो चोटी नेपालले कृषिलाई अगाडि बढाउन भनेर हामीले सिञ्चाईलाई प्राथमिकता दिएको र अन्य साना ठूला आयोजनाका लागि अरु पनि आयोजना शुरु गरेका थियौं । यसरी दातृ निकायको मुख नहेरी आफ्नै पैसा र प्रविधिबाट भएपनि कृषिलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर यो आयोजना शुरु भएको थियो । अहिले यो आयोजना भत्कियो, के भयो भनेर समाचारबाट सबैको आँखा पनि खोलिदिनु भएको छ । तर, पानी त चाहियो । कृषको खेतमा लान कसरी अगाडि जाने भनेर सरकारलाई झकझकाएको छ । आफैं पनि जोडिएको विषयमा भएकाले यसको पृष्ठभूमी बताएको हुं ।
विधि मान्नु पर्दा ढिला भयो
लोकतन्त्रमा केहि कुराहरु चाँही विधिको कुरा केहि झण्झटिलो हुंदो रहेछ । पुरेतले केहि कुरामा प्रक्रिया मिच्ने काम नगरे जस्तै छ हाम्रा केहि विधि प्रक्रिया पनि मिच्न नमिल्ने खालका छन् । कानूनहरु तयार छन् तर, अध्यादेशबाट कानून ल्याउँ होईन यो लोकतान्त्रिक विधिमा हुंदैन भनिन्छ । स्वभाविक हो, संसदलाई वाईपास गरेर अध्यादेश ल्याउने कुराहरु त्यति राम्रो हुंदैन् । त्यस्ता कानून नल्याउँदा सरकार सञ्चालनमा अप्ठ्यारो पर्छ र भोली संसदलाई विश्वासमा लिन सकिन्छ भने त अगाडि बढ्ने हो । अहिले आपतै पर्ने अवस्था नभएकाले ती कानूनहरु संसदमार्फतै अगाडि बढाउन खोज्दा केहि ढिलो भएको छ । अहिले त्यो विधि पर्खदैं छौं हामी । मङ्सिरमा नै सदन बोलाउन खोजिएको भित्रका कुर्सीहरु मिलाउने काम हुंदै छ । पुस लागेपछि मात्रै कुर्सी तयार हुन्छन् । अनि बल्ल हामी सदन बसाउँछौ । त्यसैले पुसमा मात्रै संसद बैठक बस्दै छ । त्यसपछि हाम्रा एजेण्डाहरु प्रवेश हुन्छन् । अलि छिटो दौडिउ भन्दाखेरी बिचबिचमा यस्ता केहि कुराहरुले अवरोध पुर्याएका छन् । अब संसद बसेर केहि कानूनहरु पास गरेपछि लगानीको वातावरण बन्छ ।
करको विषयमा एउटा कुरा मैले भन्दै आएको छु । तर, फेरी पनि साथीहरु(निजी क्षेत्र)ले मान्दिनु हुन्न । यो भएको अङ्कलाई साथीहरुले किन नमान्दिनु भएको हो ? साथीहरु क्याल्कुलेटर लिएर बस्नु होला ।
हाम्रो देशको खर्च योग्य आय ३८ खर्ब रुपैयाँ छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको हो । ३८ खर्ब सबै करयोग्य आम्दानी हो । हामीले अघिल्लो वर्ष उठाएको राजस्व ७ सय ३२ अर्व हो । कति भयो त्यो ? त्यसमा हामीले स्थानीय तहबाट पनि कर उठाउँछ भन्यौं । सारा हिसाब गर्दा बढीमा चालू आवमा ४० अर्वजति स्थानीय तहले कर उठाउने रेछ । अघिल्लो वर्ष त करीब करीब ३०–३२ अर्वमात्र उठाएको छ । अनि ७ सय ६०–७० अर्वलाई ३८ सय अर्वले भाग गर्दा ३३ प्रतिशत त मेरो क्याल्कुलेटरमा कहिले नि आउँदैन् ।
साथीहरुले भन्या भन्यै हुनुहुन्छ, सधैं यो करको बोझ बढ्यो भनेर । हामीले उत्पादनै नगरेको, रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाबाट उहाँहरुले तिरेको मूल्य अभिबृद्धि करको पैसा कर प्रणालीमा छ । यो हामीले तिरेको कर होईन् । सम्पूर्ण कर प्रणालीमा भ्याटको आम्दानी एक तिहाई भन्दा बढी हुनुको कारण रेमिट्यान्सको पैसा हो । हामीले यहाँ कमाएर तिरेको पैसा होईन् ।
यो भिनरहंदा ट्याक्सको भार हामीसँग कति छ ? साथीहरुले आफैं हिसाब गरेर बताईदिनु होला । आर्थिक सर्वेक्षणमा तथ्याङ्क छ । थप तथ्याङ्क हामी पनि दिउँला । हाम्रो उद्देश्य अब जीडीपीको अनुपातसँग ठाउँ छ भनेर करको भार बढाउने होईन, दायरा बढाउने हो । भौगोलिक रुपमा, क्षेत्रगत रुपमा बढाउने हो । करका दरहरु जहाँसम्म प्रत्यक्ष लगानीलाई प्रभाव पार्ने हुन्छ त्यो कर्पोरेट ट्याक्स नै हो । त्यो कर्पोरेट ट्याक्समा त हामीले कति वर्षदेखि न बढाएका छौं न घटाएका छौं । यो विषयमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ ।
डुईङ बिजनेश इण्डेक्समा आपत्ति
कर तिर्न झण्झट छ । डुईङ बिजनेश इण्डेक्सले कर तिर्न झण्झट भो भन्यो । के ले झण्झट भो भनेर हेर्दा खेरी सामाजिक सुरक्षा करको प्रावधान अनुरुपको पनि केहि कुराहरु ट्याक्स वितरण गर्दा चाहिने भनेर भन्यो । मैले त्यहाँ च्यालेञ्ज गरें । मैले यो विधि ठिक भएन भने । डुईङ बिजनेश इण्डेक्सले यदि लगानीको वातावरण पूरा गर्ने हो भने औद्योगिक सम्बन्ध बिग्रियो कि सुध्रियो त्यो पो परिसूचक हुनुपर्दछ त । औद्योगिक सम्बन्ध सुधार्नलाई नयाँ श्रम ऐनले कति राम्रो काम गरेको छ । सामाजिक सुरक्षासहितको प्रावधान छ । यहाँ रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारको त्रिपक्षीय सम्झौताको रुपमा श्रम ऐन आएको छ । औद्योगिक सम्बन्धहरु सुमधुर भएको छ । हड्तालहरु खै मैले त सुनेको छैन् । यति राम्रो वातावरण बनाएका छौं । लगानीको वातावरण सुध्रियो भन्नु पर्नेमा, कर तिर्दा कुनै एउटा फर्म बढी भर्नु पर्यो, एउटा कोलममा केहि नम्बर बढी राख्नु पर्यो भन्दैमा अनि तल झार्ने पनि सुत्र हुन्छ ? भनेर मैले विश्व बैङ्कका प्रतिनिधिलाई भनेको छु । विधिमा चुनौती गरेको छु । मिशन काठमाडौंमा आएको छ ।
अर्को कुरा, कुनै आर्थिक वर्षको मे महीनाको पहिलो हप्तामा उहाँहरुको रिपोर्ट बनाउने तथ्याङ्क कटअफ हुंदो रहेछ । त्यपछिका महीनाको हामीले गरेका राम्रा कामको कुनै हिसाबै नहुने रैछ । मे मा त हामी आएको दुई महीनामात्रै भएको थियो । मैले भनेको छु, अहिलेको प्रविधिको दुनियाँमा पनि २०१८ को ६ महीना अगाडिको तथ्याङ्क राखेर २०१९ मा लगानीको वातावरण कस्तो हुन्छ भनेर प्रोजेक्सन गरिराख्न मिल्छ ? तपाईहरुले कटअफ पोईण्ट डिसेम्बर नभए नोभेम्बरसम्मको राख्नु पर्छ । र प्रतिवेदन डिसेम्बरमा निकाल्नु पर्दछ, सके नोभेम्बरसम्मको तथ्याङ्क नभए अक्टोबरसम्मको । लगानीकर्तालाई गुमराहमा राख्न पाईदैन् । भएका सुधारहरु त जान्न पाउनु पर्यो नि, भनेर हामीले भनेका छौं ।
विश्व बैङ्कले पनि यसमा सहयोग गर्दैछ । निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना सुझावहरु दिइरहनु भएको छ । यी सबै सुझावहरुलाई समेटेर लगानी सम्मेलन अगाडि धेरै कुरा अझ राम्रो पार्नु छ । धेरै साथीहरुले आफ्नो कानून, नीति नियम राम्रो पार्नु पर्यो भनेर सुझाव दिनु भएको छ । आफ्नो कानून राम्रो पार्यो भने कसैले पनि त्यसलाई अन्यथा सोच्दैन भनेर भन्नु भएको छ । तर, विधिले नै ठग्यो भने त कराउनु पनि पर्दो रहेछ ।
(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)को २१औं स्थापना दिवसको अवसरमा शनिवार आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले गरेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
Your statistics revealed that you have
to deducted FC exchange facility from USD 2500 to USD 1500 because of its balance dedicated in govt possession. If you had imported industrial raw materials or capital goods in massive amount thereby caused huge trade deficit, it will revealed incremental GDP and economic growth, why you are accepting that the economic growth would not meet to 8% which you had targeted !
I don’t think our finance minister understands economics very well. He is saying that we need 1400-1500 billion rupee investment to achieve 8% economic growth which is ridiculous since that amount is half the GDP of the country. 8% of economic growth means adding 8% to the GDP which is currently around 3000 billion and after adding 8% it will be 3240 billion so total monetary addition is only 240 billion. Does he seriously believe that we need 1400-1500 billion investment to to add 240 billion to the economy??